ယူနိုက်တက် 2-1 တော့တင်ဟမ် ပွဲမှာ ဘယ်သူတွေက ဟီးရိုး ၊ ဘယ်သူတွေက ဗီလိန် ဖြစ်ခဲ့ကြသလဲ ? - SPORTS MYANMAR
ယူနိုက်တက် 2-1 တော့တင်ဟမ် ပွဲမှာ ဘယ်သူတွေက ဟီးရိုး ၊ ဘယ်သူတွေက ဗီလိန် ဖြစ်ခဲ့ကြသလဲ ?
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ မနေ့ ညက အိုးလ် ထရပ်ဖို့ဒ် ကွင်းမှာ နည်းပြဟောင်း ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို ဦးဆောင် နေတဲ့ တော့တင်ဟမ် ဟော့ စပါး အသင်း နဲ့ ရင်ဆိုင် ကစား ခဲ့ ရပြီး2– 1 ဆိုတဲ့ ရလဒ် နဲ့ အနိုင်ယူ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါဟာ ဖိအားတွေအောက် ကျရောက် နေခဲ့ ရတဲ့ ဆိုးလ်ရှား အတွက် တော့ စိတ်သက်သာရာ ရရှိ စေခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် ဖြစ်ခဲ့ ရပြီး မော်ရင်ဟို အတွက် တော့ စပါး နည်းပြ ဘဝ ပထမဆုံး ရှုံးပွဲ က အသင်း ဟောင်းနဲ့ ပွဲစဉ် ဖြစ်သွား ခဲ့ရ ပါတယ် ။
အဆိုပါ ပွဲစဉ် မှာတော့ ယူနိုက်တက် အတွက် တိုက်စစ်မှူး ရပ်ရှ်ဖို့ က ပွဲချိန်6မိနစ် မှ အစောပိုင်း သွင်းဂိုး နဲ့ ဦးဆောင် စေနိုင် ခဲ့ပြီး ပြိုင်ဖက် ခံစစ် ကိုလည်း ဆက်တိုက် ဆိုသလို ဖိအား တွေ ပေးနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အလီ ရဲ့ လှပ တဲ့ ဘောလုံး ထိန်း ကန်ချက် ကြောင့် စပါး တို့ ခြေပဂိုး ရရှိ ခဲ့ ကြပြီး ပထမပိုင်း ဟာ 1 – 1 ဆိုတဲ့ ရလဒ် နဲ့သာ ပြီးဆုံး ခဲ့ရ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ပွဲချိန် ဒုတိယပိုင်း မှာ ယူနိုက်တက် တို့ ပင်နယ်တီ ရရှိ ခဲ့ပြီး အဆိုပါ ပင်နယ်တီ ကို ရပ်ရှ်ဖို့ က အမှား အယွင်း မရှိ ဂိုး အဖြစ် ပြောင်းလဲ နိုင်ခဲ့ တာကြောင့် အဆိုပါ ရလဒ် နဲ့ အတူ ယူနိုက်တက် တို့ နိုင်ပွဲ ရရှိ ခဲ့ ကြပြီး အမှတ်ပေး ဇယား အဆင့်6နေရာ အထိ ကို ပြန်လည် တက်လှမ်း နိုင်ခဲ့ ကြ ပါတယ် ။ အဆိုပါ ပွဲစဉ် မှ နှစ်ဖက် အသင်း ကစားသမား တွေရဲ့ ကွင်းအတွင်း စွမ်းဆောင်ရည် တွေကို ဖော်ပြ ပေးလိုက် ပါတယ် ။
Clean Sheet မရယူ နိုင်ခဲ့ ပေမယ့် ကောင်းမွန် တဲ့ ဂိုးပေါက် ကာကွယ်မှု တွေကို ပြုလုပ် သွားနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
ပြိုင်ဖက် တိုက်စစ် ကစားသမား တွေကို ကျော်ဖြတ်ခွင့် မပေးခဲ့ ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် တိုက်စစ်ပိုင်း မှာတော့ ကောင်းမွန် တဲ့ ဖြတ်တင်ဘော တွေ ပေးပို့ နိုင်ဖို့ အားနည်း နေဆဲ ပါပဲ ။
လင်ဒီလော့ဖ် (6)
ခံစစ် မှာ မက်ဂွားယား နဲ့ ကောင်းမွန်စွာ တွဲဖက် ကစား နိုင်ခဲ့ ပေမယ့် လိုအပ်ချက် အနည်းငယ် ရှိနေ ခဲ့ ပါတယ် ။
မက်ဂွားယား (7)
တစ်နိုင်ငံ တည်းသား ဖြစ်တဲ့ ပြိုင်ဖက် တိုက်စစ်မှူး ဟယ်ရီ ကိန်း ကို အကောင်းဆုံး ထိန်းချုပ် နိုင်ခဲ့ပြီး မာကျော တဲ့ ပုံစံ ကောင်း ပြသ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
အက်ရှ်လေ ယန်း (6)
ကစားပုံ တွေက အထူး အားရ စရာ မရှိခဲ့ ပေမယ့် အသင်း ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သူ ရဲ့ အတွေ့ အကြံု တွေနဲ့ ကွင်း အတွင်း ဦးဆောင် ညွှန်ကြား နိုင်မှု တွေက အပေါင်း လက္ခဏာ ဆောင်စေ ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒဏ်ရာ ကနေ ပြန်လာတာနဲ့ အသင်း အတွက် အကျိုး သက်ရောက် မှု ပြုလုပ် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်းကို ပြသ နိုင်ဖို့ အတွက်တော့ အနည်းငယ် လိုအပ်ချက် ရှိနေ ခဲ့ ပါတယ် ။
ကွင်းလယ် မှာ ပေါ့ပါး သွက်လက်စွာ ကစား ပေးရင်း ပြိုင်ဖက် တွေကို အလုပ် ရှုပ်စေ ခဲ့ ပါတယ် ။ ဘောလုံး ပေးပို့ မှုတွေ လွဲမှား တာမျိုး ရှိခဲ့ ပေမယ့် တိုးတက် လာတဲ့ ခြေစွမ်း တွေက ပရိသတ် တွေ အတွက် အားရ ဖွယ်ရာ ပါပဲ ။
ဂျိမ်းစ် (7)
ရာသီ အစ တုန်းက လိုမျိုး အသင်း အတွက် အထူး ကောင်းမွန်စွာ ကစား ပေးနိုင် ခြင်း မရှိ ခဲ့ ပေမယ့် ဂိုးပေါက် ကန်ချက် နဲ့ ဘောလုံး ပေးပို့ မှု တွေက ကောင်းမွန် ခဲ့ ပါတယ် ။
လင်ဂတ် (7)
အသင်း အတွက် ဂိုးသွင်း ၊ ဖန်တီးမှု မလုပ် နိုင်ခဲ့ ပြန် ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် အင်္ဂလန် နည်းပြ ဆောက်ဂိတ် ပြောကြားခဲ့ သလိုပဲ အသင်းဖော် တွေနဲ့ ကောင်းမွန်စွာ ချိတ်ဆက် ကစား ပြီး ပြိုင်ဖက် တွေကို ဒုက္ခ ပေးနိုင်စွမ်း ရှိကြောင်း ပြသ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ရပ်ရှ်ဖို့ (9)
ပွဲစဉ် ရဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမား ပါပဲ ။ ဒီ နှစ်လ အတွင်း ယူနိုက်တက် ကို သွင်းဂိုး ၊ ဖန်တီးမှု တွေနဲ့ အကောင်းဆုံး အကျိုး ပြုနေ ခဲ့ ပါတယ် ။
ဂရင်းဝုဒ် (6)
မာရှယ် မရှိတဲ့ အချိန်မှာ ပါဝင်ခွင့် ရရှိ ခဲ့ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ဂိုးပေါက် ကန်ချက် တွေကို ပြုလုပ် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
လူစားဝင် ကစားသမား …
ပါရဲရား ( – )
လုခ်ရှော ( – )
တော့တင်ဟမ် ဟော့ စပါး
ဂတ်ဇာနီဂါ (6)
ရပ်ရှ်ဖို့ ရဲ့ အဖွင့်ဂိုးမှာ အမှား ကျူးလွန် မိခဲ့ ပေမယ့် ကောင်းမွန် တဲ့ ဂိုးပေါက် ကာကွယ်မှု တွေနဲ့ အသင်း အတွက် အကျိုးပြု ပေးနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
အော်ရီယာ (5)
ဒီနေ့ ပွဲစဉ် မှာတော့ ပုံမှန် ခြေစွမ်းအောက် ကျရောက် နေခဲ့ပြီး တိုက်စစ်ပိုင်း မှာရော ခံစစ်ပိုင်း မှာပါ အကျိုးထူး မပြုနိုင်ခဲ့ ပါဘူး ။
ဆန်းချက် (5)
ခံစစ်မှာ သက်သောင့်သက်သာ မကစား နိုင်ခဲ့ပဲ အဖွင့် ဂိုးမှာ အမှား ကျူးလွန် ခဲ့ပြီး ရုန်းကန် ခဲ့ရ ပါတယ် ။
အက်ဒါဝီရယ် (6)
ဒီနေ့ ပွဲ အတွက် တော့တင်ဟမ် ရဲ့ ခံစစ် မှာ ပုံစံ ကောင်း ပြနိုင် သူ တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အသင်းဖော် တွေကို တော့ အကောင်းဆုံး ဦးဆောင် မှုတွေ မလုပ် နိုင်ခဲ့ ပါဘူး ။
ဗာတွန်ဂမ် (7)
ဘယ် ခံစစ် တစ်ကြော မှာတော့ အကောင်းဆုံး လုပ်ပြ သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ခံစစ် ကစားပုံ ကောင်းမွန် ခဲ့ သလို တိုက်စစ် ကိုလည်း အထောက်အပံ့ ကောင်းတွေ ပေးနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
ဟယ်ရီ ဝင့်ခ် (7)
ပုံစံကောင်း ပြသ နိုင်ခဲ့ပြီး အသင်းဖော် တွေကိုလည်း ကူညီ ပေးနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ စည်းကမ်း သေဝပ်စွာ ကစား နိုင်ခဲ့ ပေမယ့် အမှား တစ်ကြိမ် ကျူးလွွန် ခဲ့မှု ကြောင့် အဝါကဒ် ပြသ ခံခဲ့ရ ပါတယ် ။
ဆစ်ဆိုကို (6)
ကွင်းလယ် မှာ ကောင်းမွန် တဲ့ လုပ်အား နှုန်း တွေကို ပြသ နိုင်ခဲ့ ပေမယ့် မလိုအပ်ပဲ ပြိုင်ဖက် အသင်း ကို ပင်နယ်တီ ရရှိ စေခဲ့ ပါတယ် ။
လူးကပ်စ် မော်ရာ (4)
ဒီနှစ် အတွက် တော့ သူ့ရဲ့ အဆိုးရွားဆုံး ခြေစွမ်း မြင်တွေ့ ခဲ့ရ ခြင်းပဲ ဖြစ်ခဲ့ ရ ပါတယ် ။ ကွင်းထဲ သူ ရှိမှ ရှိရဲ့လား ဆိုတဲ့ သံသယကိုတောင် ဖြစ်စေ ခဲ့ ပါတယ် ။
အလီ (7)
မော်ရင်ဟို လက်အောက် မှာ တက်တိုက် တောက်ပ နေတဲ့ အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် ကတော့ သေသပ် လှပ တဲ့ ခြေပ ဂိုးကို သွင်းယူ ပေးနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
ဆွန် (6)
ပြိုင်ဖက် ခံစစ် ကစားသမား တွေကို အတော်လေး မွှေနှောက် နိုုင်ခဲ့ပြီး စကေးပြ ကျော်ဖြတ်မှု တွေ ပြုလုပ် နိုင်ခဲ့ ပေမယ့် အကျိုး မပြု နိုင်ခဲ့ ပါဘူး ။
ကိန်း (6)
အသင်းဖော် တွေရဲ့ အထောက်အပံ့ ကောင်းတွေ ကို မရ ရှိခဲ့ ပါဘူး ။ ဒါကြောင့် ကွင်းလယ် အထိ လိုက်ဆင်းရင်း ကောင်းမွန် တဲ့ လုပ်အား တွေနဲ့ အတူ အသင်းလိုက် ကစားဟန် ကို ဖော်ဆောင် နိုင်ဖို့ ကြိုးစား ခဲ့ရ ပါတယ် ။
အဲရစ်ဆင် (6)
အန်ဒွန်ဘီလီ ( 5.5 )
လိုကယ်လ်ဆို ( – )